बाइबलका कथाहरू: सुलेमानको राज्य टुक्रिन्छ - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
यो मान्छेले किन आफ्नो लुगा च्यातेर टुक्रा-टुक्रा पार्दैछ, तिमीलाई थाह छ? यहोवाले नै उसलाई त्यसो गर्न लगाउनुभएको हो। यो मान्छे परमेश्वरको अगमवक्ता अहियाह हो। अगमवक्ता भनेको के हो, तिमीलाई थाह छ? अगमवक्ता भनेको त्यस्तो मान्छे हो, जसलाई परमेश्वरले पछि हुने कुराहरू पहिल्यै बताउनुहुन्छ।
यहाँ अहियाह यारोबामसित कुरा गर्दैछ। सुलेमानले यारोबामलाई घरहरू बनाउने काम दिएको थियो। अहियाहले यारोबामलाई बाटोमा भेट्दा उसले एउटा अनौठो काम गर्छ। उसले आफूले लगाइराखेको नयाँ लुगा च्यातेर १२ टुक्रा पार्छ। अनि उसले यारोबामलाई यसो भन्छ: ‘यसबाट १० टुक्रा लैजाऊ।’ अहियाहले यारोबामलाई किन १० टुक्रा दिएको होला, तिमीलाई थाह छ?
यहोवाले अब सुलेमानको हातबाट राज्य खोस्नुहुनेछ भनेर अहियाहले सुनाउँछ। यहोवाले १० वटा गोत्रचाहिं यारोबामलाई दिनुहुनेछ। सुलेमानको छोरा रहबामले दुई वटा गोत्रमाथि मात्र राज्य गर्न पाउनेछ।
अहियाहले यारोबामलाई भनेको कुरा सुनेपछि सुलेमान धेरै रिसाउँछ। उसले यारोबामलाई मार्न खोज्छ। तर यारोबाम भागेर मिश्र जान्छ। केही समयपछि सुलेमानको मृत्यु हुन्छ। उसले ४० वर्षसम्म इस्राएलमा शासन गऱ्यो। अब उसको छोरा रहबाम राजा हुन्छ। सुलेमान मरेको खबर पाएपछि यारोबाम मिश्रबाट इस्राएल फर्केर आउँछ।
रहबाम असल राजा होइन। उसले आफ्नो बुबा सुलेमानले भन्दा पनि क्रूर व्यवहार गर्छ। यो देखेर यारोबाम र अरू नाइकेहरू रहबामकहाँ जान्छन् र प्रजासित राम्रो व्यवहार गर्नुपऱ्यो भन्छन्। तर रहबामले सुन्दैन। उसले पहिलेभन्दा झन् निर्दयी व्यवहार गर्छ। यसकारण इस्राएलीहरूले यारोबामलाई १० कुलको राजा बनाउँछन्। तर बिन्यामीन र यहूदाका कुलले चाहिं रहबामलाई नै राजा मान्छ।
यारोबाम आफ्नो प्रजाले यरूशलेममा गएर यहोवाको मन्दिरमा उपासना गरेको मन पराउँदैन। यसकारण उसले सुनको दुई वटा बाछा बनाउँछ र १० गोत्रे राज्यका मान्छेहरूलाई त्यही बाछाको पूजा गर्न लगाउँछ। यसले गर्दा चाँडै देशभरि अपराध र हिंसा फैलन्छ।
दुई गोत्रे राज्यमा पनि गोलमाल हुन्छ। रहबाम राजा भएको पाँच वर्ष नबित्दै मिश्रको राजा लडाइँ गर्न यरूशलेम आइपुग्छ। उसले यहोवाको मन्दिरबाट थुप्रै बहुमूल्य सामानहरू लुटेर लैजान्छ। यसरी सुलेमानले बनाएको मन्दिर पछिसम्म त्यही अवस्थामा रहँदैन।
१ राजा ११:२६-४३; १२:१-३३; १४:२१-३१.
चित्रमा देखाइएका यी दुई लोग्नेमान्छेहरूको नाउँ के हो र उनीहरू को हुन्?
आफूले लगाएको लुगा अहियाहले के गर्छ र त्यसो गर्नुको अर्थ के थियो?
सुलेमान यारोबामलाई के गर्न खोज्छ?
इस्राएलीहरूले किन यारोबामलाई इस्राएलको दस कुलको राजा बनाउँछन्?
यारोबामले सुनको दुइटा बाछा किन बनाउँछ र त्यसको तुरुन्तैपछि देशमा के हुन्छ?
इस्राएल राष्ट्रको दुई कुल अनि यरूशलेममा भएको यहोवाको मन्दिरलाई के हुन्छ?
पहिलो राजा ११:२६-४३ पढ्नुहोस्।
यारोबाम कस्तो मानिस थियो र उसले आज्ञा पालन गरेमा के गर्ने प्रतिज्ञा यहोवा गर्नुहुन्छ? (१ राजा ११:२८, ३८)
पहिलो राजा १२:१-३३ पढ्नुहोस्।
अख्तियारको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन भन्ने सम्बन्धमा आमाबाबु र प्राचीनहरूले रहबामको खराब उदाहरणबाट के पाठ सिक्न सक्छन्? (१ राजा १२:१३; १ पत्रु. ५:२, ३)
जीवनमा ठूल्ठूला निर्णयहरू गर्नुपर्दा भरपर्दो निर्देशनको लागि आजका किशोरकिशोरीहरू कोमाथि भर पर्न सक्छन्? (१ राजा १२:६, ७; हितो. १:८, ९; २ तिमो. ३:१६, १७; हिब्रू १३:७)
के कारणले गर्दा यारोबामले दुई ठाउँमा सुनका बाछाहरू खडा गऱ्यो र यसबाट यहोवामाथि उसको विश्वास असाध्यै कम थियो भनेर कसरी देखियो? (१ राजा ११:३७; १२:२६-२८)
कसले दस कुललाई साँचो उपासनाको विरोध गर्न उस्कायो? (१ राजा १२:३२, ३३)